Kusukela ezikhathini zasendulo, osokhemisi asetshenziselwa ukwelapha izinto ezintathu eziyinhloko: i-iodine, itiyela nesibabule. Ngokuvamile lezi izinto asetshenziselwa ekupholiseni izimpawu izifo zesikhumba. Namuhla kudala sebuningini imithi eminye esebenza ngempumelelo esekelwe lezi zingxenye, enye yazo wamafutha sulfuric. Lokhu ejenti ine anti-fungal, antiparasitic, izakhiwo anti-microbial uphinde ngenkuthalo isicelo nezesikhumba.
wamafutha sulfuric. Imiyalelo: isenzo kwemithi
Umuthi itholakala ezimbili izinhlobo nge okuqukethwe ezahlukene nesibabule (10% no-33%) ukuthi kuthinta modality ukwelashwa. I nomuthi ungaba nomphumela kokubili emollient nokwesula, has kokubili izakhiwo kuyacasula futhi uyavikela.
wamafutha elula sulfuric uthola isicelo ekwelapheni nezokusigcoba. Phakathi lokusebenza isikhumba senzeka ukusabela nge izingxenye sulphur epidermal ulwelwesi microorganism (amagciwane, amagciwane, isikhunta), kanye izimuncagazi, okuholela wenziwa umphumela isinqandakuvunda futhi elwa namagciwane.
Kuyadingeka ukuba ufunde liner emuthini ukuze siqonde ukuthi angu-10 sulfuric wamafutha izenzo. Ukufundiswa ibonisa ukuthi lokuhlushwa izidakamizwa kule kunomthelela kwetinhlavu esasizosheshisa kunamaqoqo amangqamuzana esikhumba izinsuku ezimbalwa afike elaphe amanxeba olukha phezulu kanye isikhumba zamehlo. Umuthi has umphumela keratoplastic, ithambisa kahle isikhumba, okuvumela ezisebenzayo ngokushesha iwukudambisa izimuncagazi namagciwane. Uma ngokuthi ukulunywa, abese esebenzisa leyo wamafutha ke siyodlula ngokushesha.
wamafutha sulfuric nge emakamu eliphezulu (33%) uyakwazi athambise izingqimba engenhla epidermis, ukususa izinhlayiya isikhumba okungafunwa, isb Ludala imiphumela keratolytic. Ngosizo lwawo uswidi izifo ukuthi ahambisana cornification (seborrhea), kanye nezinduna.
Ukulungiselela amaphesenti 33 isibabule ecasula receptor ebucayi ngaleyo ndlela kwandisa kwegazi isikhumba futhi umzimba ku amaseli ayo. Ngenxa yalokho lezi zinqubo senzeka ukuphulukiswa izibazi ezijulile, okuyinto kuyagcinwa in iziguli induna, kanye zingcwecwe ezinkulu psoriatic.
Uma usebenzisa izidakamizwa kancane bome esikhumbeni, ngakho ukuze uyogwema yobunzima flaking ngesikhathi yokwelapha, umthamo kumele ngokuqinile waphawula.
wamafutha sulfuric. Imiyalelo: Izimo
I Izimo esikhulu ukuze ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa iguliswa. Ukuze ugweme ukusabela ezinkulu ezimbi, kubalulekile ngaphambi kokufaka isicelo imithi ukuzama mafutha anamakha phezu endaweni encane isikhumba (isib, amadolo). Ngemva kwamahora ambalwa kufanele ahlaziye umphumela. In the ukungabikho esintinyelayo, ukulunywa noma ububomvu ukulungiselela kungenziwa advantageously esetshenziswa.
Namafutha ngokuvamile elibekelwe iziguli abangakwazi ukusebenzisa ezinye izindlela. Akunconyelwe wamafutha sulfuric ngesikhathi sokukhulelwa kanye nezingane iminyaka emithathu. Uma isidingo sokwelashwa nale izidakamizwa sisekhona, qiniseka ubonane onguchwepheshe. Lapho kungenzeka imithi ngampela inikezwe izingane kusukela eminyakeni izinyanga ezimbili (lapho isifo batshelwa).
wamafutha sulfuric. Ukufundiswa: Isikali nokwelashwa lwemithi
Umuthi livame ngaphambi sokulala. Namafutha sisetshenziswa ukuhlanza isikhumba ngeviki, esiphezulu - kwezinsuku eziyisishiyagalolunye. Ukuze ekwelapheni utwayi edingekayo ukucubungula ezindaweni eziningi isikhumba, ukuze ugweme ukweqisa izidakamizwa, indlela eziyishumi kumele isetshenziswe.
Endabeni psoriasis futhi ukubonakaliswa fungal wamafutha sisetshenziswe kuphela lihambisana nezinye izidakamizwa.
Umuthi for namakati "Misa Nokucindezeleka": incazelo, yokusetshenziswa futhi impendulo bezilwane
Kuyini imoto windscreen Wiper motor. Indlela esikhundleni motor Wiper
Ngingakwazi ukusebenzisa Troxevasin ngesikhathi sokukhulelwa